कसरी ल्यान्डि Page पृष्ठ अप्टिमाइज गर्ने Martech Zone
कसरी ल्यान्डिंग पृष्ठ अप्टिमाइज गर्ने
आइतबार, अक्टोबर 21, 2012 आइतबार, अक्टोबर 21, 2012 Douglas Karr
तपाईंको ल्यान्डि page पृष्ठमा केवल केही सानो परिवर्तनले तपाईंको व्यवसायको लागि धेरै राम्रो परिणाम दिन सक्छ। ल्यान्डि pages पृष्ठहरू तपाईको कल-टु-एक्शन र ट्रान्जिसन पोइन्टको लागि गन्तव्य हुन् जहाँ एक आगन्तुक कि त लिड वा रूपान्तरण हुन्छ। यहाँ राम्रो अप्टिमाइज ल्यान्डि page पृष्ठका केही प्रमुख तत्वहरू छन्। दिमागमा राख्नुहोस् हामी खोज ईन्जिनको लागि पृष्ठलाई मात्र अनुकूलित गरिरहेका छैनौं, हामी रूपान्तरणको लागि पनि पृष्ठ अनुकूलित गर्दैछौं!
पृष्ठ शीर्षक - तपाइँको पृष्ठ को शीर्षक खोज परिणाम र सामाजिक शेयरहरु मा प्रदर्शित हुन गइरहेको छ र पृष्ठ को सबै भन्दा महत्वपूर्ण तत्व को लागी कसैलाई लुकाउन को लागी हो। एक बाध्यकारी शीर्षक छनौट गर्नुहोस्, यसलाई characters० क्यारेक्टर मुनि राख्नुहोस्, र पृष्ठको लागि एक मजबूत मेटा वर्णन समावेश गर्नुहोस् - १70 वर्ण मुनि।
URL - किनकि तपाईंको URL खोज परिणामहरूमा प्रदर्शित गरिएको छ, अभियान वर्णन गर्न छोटो, संक्षिप्त, अद्वितीय स्लग प्रयोग गर्नुहोस्।
शीर्षक - यो जारी राख्नको लागि फारामलाई प्रलोभनमा पार्नको लागि पृष्ठमा सब भन्दा बलियो तत्व हो। ल्यान्डि Pages पृष्ठहरूमा सामान्यतया नेभिगेसन तत्त्वहरूको पनि अभाव हुन्छ ... तपाई पाठकलाई कार्यमा केन्द्रित गर्न चाहनुहुन्छ, विकल्पहरू होइन। शब्दहरूको प्रयोग गर्नुहोस् जसले आगन्तुकलाई कार्यमा ड्राइव गर्दछ र जोडतोडको भावना थप गर्दछ। दर्ता पूरा गरेर आगन्तुकले पाउने फाइदाहरूमा केन्द्रित हुनुहोस्।
सामाजिक साझेदारी - सामाजिक बटन सम्मिलित गर्नुहोस्। आगन्तुकहरु प्राय: आफ्नो नेटवर्क संग जानकारी साझा। एउटा उदाहरण घटना रेजिष्ट्रेसन पृष्ठ हो ... जब तपाईं घटनाको लागि दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं प्राय जसो तपाईंको नेटवर्क भित्रका व्यक्ति पनि घटनामा उपस्थित भएको चाहनुहुन्छ।
छवि - उत्पाद, सेवा, ह्वाइटपेपर, अनुप्रयोग, घटना, आदि को एक पूर्वावलोकन छवि थप्ने एक दृश्य तत्व हो जुन तपाईंको अवतरण पृष्ठमा रूपान्तरण बढाउनेछ।
सामग्री - तपाईंको अवतरण पृष्ठमा तपाईंको सामग्री छोटो र पोइन्टमा राख्नुहोस्। सुविधाहरू र मूल्य निर्धारणमा ध्यान नदिनुहोस्, बरु फाराम पूरा गरेर तपाईंको जानकारी सबमिट गर्ने फाइदाहरूमा फोकस गर्नुहोस्। बुलेटेड सूची, उपशीर्षक, बोल्ड र ईटालिक पाठ जोडको लागि प्रयोग गर्नुहोस्।
प्रशंसापत्र - एक व्यक्तिबाट वास्तविक प्रशंसापत्र थप्ने र व्यक्तिको छवि सहित प्रस्तावमा प्रामाणिकता थप गर्दछ। तिनीहरू को हुन्, कहाँ काम गर्छन्, र उनीहरूले प्राप्त गरेका लाभहरू समावेश गर्नुहोस्।
फारम - यो तपाइँको फारम मा कम क्षेत्रहरु, अधिक रूपान्तरणहरू तपाईं प्राप्त गर्नुहुनेछ। मानिसहरूलाई जानकारी दिनुहोस् कि तपाईंलाई के आवश्यक छ, तपाईंलाई किन यसको आवश्यक छ र कसरी तपाईं यसलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ।
लुकेका क्षेत्रहरू - आगन्तुकहरूका बारे थप जानकारी क्याप्चर गर्नुहोस् जस्तै सन्दर्भ स्रोत, अभियान जानकारी, उनीहरूले प्रयोग गरेको खोज सर्तहरू र कुनै अन्य जानकारी जुन तपाईंलाई उनीहरूलाई नेतृत्वको रूपमा पूर्ववर्ती गर्न र ग्राहकमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्दछ। नेतृत्व डाटाबेसमा यो डाटा पुश गर्नुहोस्, मार्केटिंग स्वचालन प्रणाली वा CRM।
कानूनी - तपाइँ व्यक्तिगत जानकारी स collecting्कलन गर्दै हुनुहुन्छ र गोपनीयता कथन र पूर्ण सर्त वर्णन गर्नका लागि प्रयोगका सर्तहरू हुनुपर्दछ, विस्तृत रूपमा, तपाइँ कसरी आगन्तुकहरूको जानकारीको उपयोग गर्नुहुन्छ।
यहाँ सम्बन्धित लेखहरू छन् जुन चासोको लागि हुन सक्छन्:
कसरी प्रयोग गर्ने कीवर्ड प्रभावकारी
पृष्ठलाई कसरी अनुकूलित गर्ने स्थानीय खोजी
कसरी एक अनुकूलन गर्न यूट्यूब भिडियो
कसरी तपाइँको अनुकूलन गर्ने शीर्षक ट्यागहरू
कसरी एक अनुकूलन गर्न ब्लग पोस्ट
टैग: रूपान्तरण अनुकूलनरूपान्तरणफारमअवतरण पृष्ठअवतरण पृष्ठ फारामहरूअवतरण पृष्ठ अनुकूलनप्रस्तावएक अवतरण पृष्ठ अनुकूलन गर्नुहोस्दर्ता पृष्ठ अनुकूलन
जबकि मलाई लाग्छ कि यो लेआउट केहि उद्योगहरु को लागी एक महान सुरूवात बिन्दु हुनेछ, अरु को लागी यो केवल धेरै धेरै चलिरहेको छ। वास्तवमा थाहा पाउने एक मात्र तरिका A/B परीक्षण हो।
राम्रो पोष्ट! यो पढ्न लायकको कुरा हो जुन म यसको धेरै कदर गर्छु। राम्रो काम।